Chọpụta ihe ị ga - ahụ na Sil Canyons | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | España, General, Ihe ị ga-ahụ
Anyị niile ga-ekweta na obodo Galician nwere ọdịdị ala dị egwu nke na-eme ka ndị njem nleta na-arịwanye elu. Yabụ ịmara onye ọ bụla n'ime ha. Otu n'ime isi ihe kachasị amasị gị na usoro nke a na-akpọ oghere ndị sitere n'okike bụ Sil Canyon, mpaghara ndagwurugwu nke osimiri Sil gwuru na mpaghara Ribeira Sacra, ebe a makwaara maka mmanya ya.
O doro anya na ebe a nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịga ezumike izu ụka dị mkpirikpi. Site na ụgbọ mmiri dị na Sil ka echiche, ụzọ ụkwụ njem na ebe obibi ndị mọnk ochie. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ebe ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe kacha mma Ribeira Sacra.
1 Kedu ka anyị si banye na Sil Canyons
2 Unique eke ohere
3 Echiche na Canyons Sil
4 Rozọ ụgbọ mmiri
5 Utezọ ndị mọnk
Kedu ka anyị si banye na Sil Canyons
Ndi choro iru ebe a, dika Ha na-aga obodo Orense, site na nke ị nwere ike iru Sil Canyons. Naanị ma ọ bụrụ na ị si mpaghara ugwu ga-aga Monforte de Lemos site na mpaghara Lugo. Site na Orense were N-120 na Vilamelle tụgharịa na LU-P-5901. Site na Monforte de Lemos ị ga-ewere PO-533 wee jeezie ụzọ ahụ e kwuru na mbụ. Anyị nwere ike ịga ụgbọ ala ma ọ bụ debanye aha maka njem mmụta, ebe ụfọdụ na-ahazikarị site na obodo Santiago de Compostela na Ourense.
Unique eke ohere
E gwupụtawo Sil Canyons site n'okporo ụzọ Sil river ma ụfọdụ na-ahụta ya dị ka ugwu kachasị elu na Europe. E wezụga ntụnyere, ọwa ndị a nwere ọgaranya pụrụ iche. Ọnọdụ ya pụtara na ọtụtụ omenala na ihe nketa ya ka dịgidere, nke mere ka ọ bụrụ mpaghara bara nnukwu uru. Omenala dịka ite ojii nke Gundivós bụ ihe akaebe nke a. Ọzọkwa, ọ maara nke ọma na n'ime ebe a na-rụrụ nke cultivation nke ubi-vine, na usoro nke dị iche na nke ubi vaịn na-emebu, ebe ọ bụ na e guzobere ha na mkpọda ugwu. Tozọ isi wepụ nkata mkpụrụ vaịn ahụ bụ site n'ụgbọ oloko ndị e debere n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ iwetu ha n'osimiri ebe a na-achịkọta ha n'ụgbọ mmiri, nke bụ ụzọ a na-emebu.
Echiche na Canyons Sil
Otu n'ime ihe ndị kacha amasị ebe ndị a bụ echiche dị egwu nke ị nwere ike iji nweta snapshots mara mma. N’ebe dị nso n’obodo Parada de Sil, nke na-abụkarị otu n’ime ebe ndị a na-akwụsị ma ọ bụrụ na anyị ejiri ụgbọ ala aga, bụ otu n’ime echiche ndị kasị mma e nwere. Anyị na-ekwu na Balconies nke Madrid. Ọ bụrụ na anyị gaa Sanctuary nke Cadeiras anyị na-esote ya. Site na ebe a ị nwere echiche dị oke mma banyere Canyons ma ọ bara uru ịga ebe ahụ. Echiche ndị ọzọ bụ Mirador das Cadeiras na Sampil, na-ele n'akụkụ nke ọzọ nke Balcones de Madrid. Echiche nke Santiorxo nwere ụzọ eji eme osisi iji hụ ebe obibi ndị mọnk Santa Cristina de Ribas de Sil. Na nso nso bu echiche nke oflọ Nsọ nke Cadeiras na Cotarro das Boedas. Mirador de Cividade dị na mpaghara Lugo ma nwee ụzọ ụkwụ dị nchara nke nwere ike inye gị ụfọdụ mgbatị. Na Mirador del Duque ị nwere ike ịhụ mbara ala ndị a raara nye maka ịkọ mkpụrụ vaịn.
Rozọ ụgbọ mmiri
Na mgbakwunye na iji ụgbọ ala eleta echiche ndị ahụ, enwere ihe ọzọ anyị ga-eme ma ọ bụrụ na anyị ga-eleta Sil Cañones. Ọ bụ ihe gaa n'okporo ụzọ catamaran na Sil river, na-ekiri canyons n'okpuru. Enwere ike ịme njem ndị a site na mmiri dị iche iche, dịka enwere na Santo Estevo, na Nogueira de Ramuín, na Abeleda, Castro Caldelas ma ọ bụ na Belesar, O Saviñao. Ọ bụ ihe amamihe dị na-eweta debe ebe ahụ n'ụgbọ mmiri na oge dị elu, ya bụ, n'oge ọkọchị, n'ihi na nleta ndị ahụ nwere ike mejupụta ya ngwa ngwa.
Utezọ ndị mọnk
Mgbe ị na-eme njem ụgbọ ala, anyị agaghị akwụsị na elele anya, kamakwa ịnụ ụtọ nketa nke mpaghara ahụ. Kpọmkwem nke ụlọ obibi ndị ochie nke dị n'akụkụ ụfọdụ. Ebe obibi ndị mọnk nke Santo Estevo de Ribas de Sil bụ ugbu a ihe ngosi, ya mere ọ nwere ike ịbụ ezigbo ebe obibi. Na Ebe obibi ndị mọnk nke Santa Cristina de Ribas de Sil Ọ bụ otu n'ime ngosipụta kachasị mma nke Romanesque n'ime ime obodo Galicia. Ebe obibi ndị mọnk e wuru na narị afọ nke XNUMX na nke XNUMX nke na-eme ka ọ dịrị adị. Otu n'ime ebe kachasị mma bụ Romanesque cloister n'ime, nke nwere ọnụ ụzọ mbata mara mma na ụlọ elu nke jere ozi dị ka onye na-eche nche na ụlọ mgbịrịgba. Ebe ọzọ anyị nwere ike ịhụ bụ ebe nsọ nke Cadeiras na Sober, nke dị nso na ya bụ ebe e wusiri ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Sil Canyons na Galicia